Cybersex ကိုမလိုလားအပ်သောအသုံးပြုမှုတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်စိတ်ရင်းစေတနာထည့်ဝင်မှု (2019) - Your Brain On Porn
ဘာ၏ compulsive အသုံးပြုမှုမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အစိတျရငျးအလှူငွေ (2019)
J ကိုပြုမူနေစွဲ။ 2019 စက်တင်ဘာ 11: 1-9 ။ Doi: 10.1556 / 2006.8.2019.47 ။
Brahim FB1, Rothen S က2,3, Bianchi-Demicheli က F3, Courtois R ကို1,4, Khazaal Y ကို5,6.
ဘာ ပို. ပို. compulsive အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာစိတ်ရင်းနဲ့ဘာများ compulsive အသုံးပြုမှုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အခန်းကဏ္ဍအကဲဖြတ်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
နမူနာ 306 ကျဘာအသုံးပြုသူများသည် (150 ယောက်ျားနဲ့ 156 အမျိုးသမီးများကို) ၏ပါဝင်သည်။ သင်တန်းသားများကို, ကျဘာများအတွက်ကျဘာလှုံ့ဆော်မေးခွန်းလွှာ (တိုးမြှင့်, ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနှင့်လူမှုရေးစိတ်ရင်း), နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire Inventory-2 (dyadic နှင့်တိုက်ပိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ) အဆင်ပြေအောင်အဆိုပါ compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းစကေး (CIUS) သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ရည်ရွယ်ချက်ကကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလိင်, နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအ CIUS ရမှတ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အတူတစ်အသင်းအဖွဲ့ယောက်ျားဘို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်သော်လည်းမိန်းမတို့အဘို့, လူမှုရေးစိတျရငျးနဲ့အပိုဆောင်းအသင်းအဖွဲ့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုလိင်-related CIUS ရမှတ်ဖို့မျှဝေသူများတွင်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှုပြသခဲ့သည်။
ဘာလှုံ့ဆော်မေးခွန်းလွှာ; အင်တာနက်စွဲ; compulsive ကျဘာ; ဘာစွဲ; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ
Doi: 10.1556 / 2006.8.2019.47
ဘာထိုကဲ့သို့သောညစ်ညမ်း, webcam, လိင်ချက်တင်, အွန်လိုင်းလိင်ဂိမ်းနှင့်ချိန်းတွေ့ (အဖြစ်လိင်-related အင်တာနက်ကိုလှုပ်ရှားမှုများကိုကျယ်ပြန့်, ပါဝင်သည်Döring, 2009; Wéry & Billieux, 2017) ။ ကို virtual တွေ့ဆုံအပြင်, ဘာကိုမှန်ကန်ရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အစည်းအဝေးလွယ်ကူချောမွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဘာ၏အခြားအပြုသဘောသက်ရောက်မှု (မှတ်ချက်ပြုထားသည်Grov, Gillespie, Royce, & Lever, 2011) ။ ဥပမာ, ကလိင်စိတ်နိုးထမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလွယ်ကူချောမွေ့ (Allen က, Kannis-Dymand, & Katsikitis, 2017) ။ ဒါဟာအစလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွနှင့်အတူသို့မဟုတ်အသစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့် (များ၏ရှာဖွေရေးနှင့်အတူစုံတွဲများကိုကူညီနိုငျမစ္စအောလ်ဘရိုက်, 2008; Philaretou, Mahfouz, & Allen, 2005).
compulsive ကျဘာအသုံးပြုမှုကို (ဘာစားသုံးသူ၏သေးငယ်တဲ့အချိုးအစားကိုအကျိုးသက်ရောက်ပုံရသည်Dufour et al ။ , 2016; Frangos, Frangos, & Sotiropoulos, 2010; Kafka, 2010) နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲနေ့စဉ်အသက်တာကိုတာဝန်ဝတ္တရားကျေပွန်အတွက်နှောင့်အယှက်များနှင့်အိပ်စက်ခြင်း-related ပြဿနာများ (နှင့်ဆက်စပ်နေသည်Grubbs, Volk, Exline, & Pargament, 2015; Karila et al ။ , 2014) ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းပါဝင်သောအများအပြားလေ့လာမှုများမှာတော့ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ compulsive ကျဘာသုံးစွဲသူများ, (porn ကိုကြည့်ထဲကနေ သာ. ကြီးမြတ် arousal နှင့် cue reactivity ကိုပြသကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2011; Laier & အမှတ်တံဆိပ်, 2014; Laier, Pawlikowski, Pekal, Schulte, & Brand, 2013; Laier, Pekal, & Brand, 2014) ။ သို့သော်ခေါင်းစဉ်၏အရေးပါမှုကိုရှိနေသော်လည်းကနည်းနည်း (ကိုလေ့လာခဲ့ပြီးကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2011) ။ အထူးသဖြင့်, နည်းနည်း (compulsive ကျဘာကိုအသုံးပြုခြင်းရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးအဖွတျအကြောင်းကိုလူသိများသည်ဖရန့် et al ။ , 2018).
အနုတ်လက္ခဏာအရေးတကြီး (အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများတွင် Impulse ပြုမူဖို့သဘောထားကို) နဲ့ပေါင်းစပ် negative စိတ်ခံစားမှုကျဘာအသုံးပြုမှုကိုအထောက်အကူပြုရန်တွေ့ပါပြီ (Wéry, Deleuze, Canale, & Billieux, 2018), ဖြစ်ကောင်းအနုတ်လက္ခဏာနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းအဖြစ်။ စိတ်ရင်း (အထူးသဖြင့်လက်တွေ့ဘဝပြproblemsနာများမှလွတ်မြောက်ရန်) ကိုကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအရာများသည်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုသြဇာသက်ရောက်သည်။Benschop et al ။ , 2015), အမူအကျင့်စွဲလမ်း (Billieux et al ။ , 2011; Király et al ။ , 2015; Zanetta Dauriat et al ။ , 2011), နှင့် compulsive ကျဘာ (ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, Laier, & လူငယ်, 2014) ။ အတူသို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမရှိဘဲဘာ, (Putnam & Maheu, 2000; Wéry, Karila, Sutter, & Billieux, 2014), (အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမဟာဗျူဟာအဖြစ်အချို့သောလူများကအသုံးပြုသည်Barrault, Hegbe, Bertsch, & Courtois, 2016; တောင်ပိုင်း, 2008) ။ စွမ်းရည်မြှင့်နှင့်လူမှုစိတ်ရင်း (ဖရန့် et al ။ , 2018) ကိုလည်း compulsive ကျဘာအတွက်အခန်းကဏ္ဍလိမ့်မည်။ အင်တာနက်ကိုချိန်းတွေ့အပေါ်လေ့လာရေး (လူမှုရေးစိတ်ရင်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုမျဉ်းသားပါပြီSumter, Vandenbosch, & Ligtenberg, 2017) နှင့် arousal ၏မြော်လင့် porn စောင့်ကြည့်သည့်အခါ (လူငယ်တို့, 2008).
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ (ကမောင်းနှင်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်အသက်တာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်Levine, 2003; Pfaus, 2009) ။ အလယ်အလတ်အသင်းအဖွဲ့များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အကျဘာတိုးမြှင့်စိတ်ရင်းအကြားတွေ့ပါပြီ (ဥရောပ Communities ၏ကော်မရှင်, 2002; ဖရန့် et al ။ , 2018; မာကု, Toland, Rosenkrantz, ဘရောင်း, & ဟောင်ကောင်, 2018; Spector, Carey, & Steinberg, 1996), ဘာများတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်နှိုးဆွသောဆိုးကျိုးများနှင့်အတူအရတော့ (Beutel et al ။ , 2017; Reid, Li, Gilliland, Stein, & Fong, 2011) ။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုစိတ်ရင်းကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဘာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်တိုက်ပိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အကျဘာလူမှုရေးစိတျရငျး (အကြားမရှိ, အသင်းအဖွဲ့များအကြားအားနည်းဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ဖရန့် et al ။ , 2018).
ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကျဘာ-related စိတ်ရင်းနှင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအတွက် compulsive ကျဘာအသုံးပြုမှုအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအကဲဖြတ်ရန်ထို့ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုကွန်ရက်ထိန်းသိမ်းသူများ၏သဘောတူညီချက်ဖြင့်လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဖိုရမ်များပေါ်တွင်ကြော်ငြာများပို့စ်တင်နေဖြင့်အွန်လိုင်းကောက်ယူခဲ့သည်။ ဒါဟာမည်သူမဆိုအသက် 18 နှစ်ပေါင်းမှာသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုထဲမှာပါဝင်ကျော်ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမပေးချေမှုလေ့လာမှုမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ခဲ့သည်။
အဆိုပါစုဆောင်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြီးနောက် 761 လူတွေ link ကိုနှိပ်လိုက်နှင့် 605 လေ့လာမှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ ပြီးစီးမှုနှုန်းတဖြည်းဖြည်းယုတ်လျော့လျက်, မေးခွန်းလွှာစတင်ခဲ့သူ 358 ဘာသာရပ်များ၏ 605 လူဦးရေဒေတာအပိုင်းအတိတ်ဆက်ပြောသည်။ ပျောက်ဆုံးတန်ဖိုးများကိုဖယ်ရှားခဲ့ကြသည်ပြီးနောက်နောက်ဆုံးနမူနာ 306 ဘာသာရပ်များ, ဆိုလိုသည်မှာ, 150 ယောက်ျား (49%) နှင့် 156 အမျိုးသမီးတွေ (51%) ပါဝင်သည်။ အဆိုပါအသက်အပိုင်းအခြား 18-69 နှစ်ပေါင်းပျမ်းမျှ 32.63 (± 10.83) နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယောက်ျား၏ပျမ်းမျှအသက် 33.44 (± 11.84) နှစ်နှင့်အမျိုးသမီး 31.86 (± 9.73) နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုဆွစ်ဇာလန် (68%), ပြင်သစ် (25%), ဘယ်လ်ဂျီယံ (2%), ကနေဒါ (1%), USA သို့ (1%), နှင့်အခြားနိုင်ငံများမှအဓိကအားခဲ့ကြသည်။ သင်တန်းသားများကို၏အကြောင်း 73% ဆက်ဆံရေးရှိကြ၏။ တစ်ဦးလိင်ကွဲတိမ်းညွတ်နှင့်အတူပြည်သူ့အကြောင်းကို 84 နမူနာများ၏%, 12% အကြောင်းရိုးရိုးတိမ်းညွတ်ရှိသူများနှင့်အကြောင်းကို 4% သူတို့လိင်တူဆက်ဆံသူဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားကိုယ်စားပြုသည်။
မေးခွန်းလွှာ၏ပထမဦးဆုံးအစိတ်အပိုင်းသင်တန်းသားများကို '' sociodemographic ဝိသေသလက္ခဏာများစူးစမ်းမေးခွန်းများပါဝင်သည်။ (က) compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းစကေး (CIUS), (ခ) ဘာလှုံ့ဆော်မေးခွန်းလွှာ (CMQ) နှင့် (ဂ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire Inventory-2 (SDI-2): အဆိုပါမေးခွန်းလွှာ၏ကျန်ရှိသောသုံး tools များပါဝင်သည်။
အဆိုပါ CIUS (စွဲလမ်းအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကဲဖြတ်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့သည်Meerkerk, ဗန်ဒင် Eijnden, Vermulst, & Garretsen, 2009) နှင့်ကဲ့သို့သောအတည်ပြုထားသည်။ ဒါဟာ (14 နေ 5-အမှတ် Likert စကေးနှင့်အတူ0ပစ္စည်းများပါဝင်သည်ဘယ်တော့မှ) (56 မှမကြာခဏ) ။ အဆိုပါ CIUS အဆက်မပြတ်အမျိုးမျိုးသောလေ့လာမှုများနှင့်နမူနာအတွက်စုစည်းတည်ဆောက်ပုံရှိသည်ကိုတွေ့ခဲ့ပြီး (Khazaal et al ။ , 2011, 2012; Meerkerk et al ။ , 2009; Wartberg, Petersen, Kammerl, Rosenkranz, & Thomasius, 2014) ။ အမြင့်ရမှတ်အင်တာနက်သူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ရန်ဖြေဆိုသူ '' နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းဖော်ပြသည်။ အင်တာနက်ကို-related စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုအကဲဖြတ်သည်အခြားလေ့လာမှုများ (အစီရင်ခံအဖြစ်Khazaal et al ။ , 2015), အ CIUS compulsive ကျဘာအသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်အဆင်ပြေအောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ CIUS သာကျဘာအပြုအမူတွေကိုပစ်မှတ်ထားကြောင်းသေချာစေရန်, ကျနော်တို့စကားလုံးဆိုတဲ့အချက်ကိုမှသင်တန်းသားများကို '' အာရုံကိုဆွဲငင် အင်တာနက်ကို အတိုင်းအတာထဲမှာကျဘာမှတစ်ခုတည်းကိုသာရည်ညွှန်းပါတယ်။ အဆိုပါ CIUS နှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းအကဲဖြတ်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည်အခြားတူရိယာကိုအောင်မြင်စွာဂိမ်းနှင့်လောင်းကစားဝိုင်း (လေ့လာဖို့အဆင်ပြေအောင်ပြီKhazaal et al ။ , 2015), နှင့်ဘာ (Downing, Antebi, & Schrimshaw, 2014; Varfi et al ။ , 2019; Wéry et al ။ , 2018), သူတို့ရဲ့ psychometric ဂုဏ်သတ္တိများပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲ။
အဆိုပါ CIUS ပစ္စည်းများထိုကဲ့သို့သောထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံး, အဆက်မပြတ်, ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ, ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနှင့်စိတ်ဓါတ်များအပြောင်းအလဲများအဖြစ်စာပေတွင်ဖော်ပြထားသော compulsive ကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုများ၏ပုံမှန်ရောဂါလက္ခဏာတွေ, ပစ်မှတ်ထား။ ဒါဟာကောင်းသောပြည်တွင်းရေးရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု (Cronbach ရဲ့α = .90 နှင့်အတူကောင်းသောတည်ငြိမ်မှုရှိပြီး; Meerkerk et al ။ , 2009).
အဆိုပါ CMQ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာက်ဘ်ဆိုက်များ၏အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်စိတ်ရင်းသတ်မှတ်ဖေါ်ပြဖရန့် et al ။ , 2018) ။ ဒါဟာနေ 14-အမှတ် Likert စကေးအပေါ် rated5ပစ္စည်းများပါဝင်သည် ဘယ်တော့မှ သို့ အမြဲသို့မဟုတ်နီးပါးအမြဲ, အချက်သုံးချက်န်းကျင်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ: တိုးမြှင့်, လူမှုရေးနှင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း။ တိုးမြှင့်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာအွန်လိုင်းမှလိင်မှုကိစ္စလှုပ်ရှားမှု၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပျော်မွေ့မှု (ဆိုလိုသည်မှာ“ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောကြောင့်” နှင့်“ ငါခံစားချက်ကိုနှစ်သက်သောကြောင့်”) နှင့်ကိုက်ညီသည်။ Social ရည်ရွယ်ချက်သည်သုံးစွဲသူများခံစားရသည့်နက်ရှိုင်းဆုံးသောစိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုသည့် virtual world မှတဆင့်ခံစားရသည့်ဆက်နွယ်မှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ တတိယရည်ရွယ်ချက်သည်ဆိုက်ဘာဆက်စ်ကိုလက်တွေ့ဘဝမှလွတ်မြောက်ရန်နှင့်လက်တွေ့ဘဝပြconcernsနာများမှကင်းဝေးစေသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ထင်ဟပ်စေသောဖြေရှင်းနည်းများကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ“ ငါစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့အခါငါ့ကိုနှစ်သိမ့်မှု” နှင့်“ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကိုမေ့လျော့စေရန်” ပြနာများသို့မဟုတ်စိုးရိမ်မှုများ ") ။ CMQ တွင်စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးများရှိသည်။ Cronbach ၏αသည်ပထမအချက်အတွက် .84၊ ဒုတိယအချက်အတွက် .73 နှင့်တတိယအချက်အတွက် .79 သည်။ဖရန့် et al ။ , 2018), အရာလက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ SDI-2 (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အကျိုးစီးပွားအဖြစ်သတ်မှတ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအကဲဖြတ်ရန်ကိုအသုံးပြုသည်Spector et al ။ , 1996) ။ ဒါဟာ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အကဲဖြတ်များအတွက်အများဆုံးမကြာခဏအသုံးပြုသောတူရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်မာကု et al ။ , 2018) ။ ဒါဟာကနေအထိတစ်ဦး 14-အမှတ် Likert စကေးအပေါ်အလိုဆန္ဒ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အရေးပါမှုတိုင်းတာ9ပစ္စည်းများပါဝင်သည် အဘယ်သူမျှမအလိုဆန္ဒ သို့ ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒ သို့မဟုတ်ကနေ မဟုတ်မှာအားလုံးအရေးကြီးသော သို့ အလွန်အရေးကြီးသော။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ၏ကြိမ်နှုန်းတိုင်းတာ items ကနေအထိတစ်ဦး 8-အမှတ် Likert စကေးအပေါ် rated နေကြတယ် ဘယ်တော့မှ သို့ တစ်နေ့တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး။ (က) dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ (ကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အလိုဆန္ဒ) နှင့် (ခ) တိုက်ပိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒတစ်ကိုယ်တော်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ (အလိုဆန္ဒ: အဆိုပါပစ္စည်းများကိုတစ်ဦးစုစုပေါင်းရမှတ်ထုတ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်ယင်း၏နှစ်ခုအစိတ်အပိုင်းအတိုင်းအတာများအတွက်ရမှတ်များထုတ်လုပ်ရန်ချုပ်ဖော်ပြနိုင်ပါသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု) ။ Dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒတစ် 1 ထံမှ9အထိစုစုပေါင်းရမှတ်များနှင့်ပစ္စည်းများ0ထံမှ 62 အထိစုစုပေါင်းရမှတ်နှင့်အတူ 10-13 ၏ပေါင်းလဒ်မှတိုက်ပိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အတူပစ္စည်းများ 0-23 ကိုက်ညီ။ item 14 အတိုင်းအတာသင်တန်းသားများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမရှိဘဲလုပျနိုငျနှင့်တိုက်ပိတ်ဒါမှမဟုတ် dyadic အလိုဆန္ဒအတိုင်းအတာတစ်ခုခုကိုပိုင်ဆိုင်မထားဘူးအဘယ်အရာကိုမှအကဲဖြတ်ထားပါသည်။ (တိုက်ပိတ်ဆန္ဒတိုက်ပိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှုန်းစိုးရိမ်ခြင်းနှင့် dyadic အလိုဆန္ဒတစ်ဦးအဖော်နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ကြိမ်နှုန်းစိုးရိမ်Spector et al ။ , 1996) ။ အဆိုပါ SDI-2 အသီးသီးနှစ်ခုအချက်များ (.86 နှင့် .96 ၏ကောင်းသောပြည်တွင်းရေးရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုနှင့်အတူကောင်းသော psychometric အရည်အသွေးတွေရှိပါတယ်; Spector et al ။ , 1996) ။ ယခင်လေ့လာမှုများထိုကဲ့သို့သောလိင်တူချစ်သူများနှင့်လိင်တူချင်းအထီး (အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများနှင့်လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့နှင့်အတူနမူနာ, ဖြတ်ပြီးတည်ငြိမ် psychometric ဝိသေသလက္ခဏာများအစီရင်ခံတင်ပြDosch, Rochat, Ghisletta, Favez, & Van der Linden, 2016; မာကု et al ။ , 2018).
တစ်ဦးဖော်ပြရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးနောက်ကျနော်တို့ကျောင်းသားရဲ့အသုံးပြုသော tကျား, မနှိုင်းယှဉ်နဲ့ Pearson ရဲ့ဆက်စပ်မှုများကို -test variable တွေကိုအကြားလင့်များအကဲဖြတ်ရန်လေ့လာဆန်းစစ်။ ဒေတာပျောက်ဆုံးခဲ့ကြဘယ်မှာရှိရမှတ်အဆိုပါ subscale ၏ပစ္စည်းများကိုများအတွက်တစ်ဦးချင်းအားဖြင့်ရရှိသောရမှတ်များ၏ပျမ်းမျှဖြင့်အစားထိုးခြင်းသို့မဟုတ်စုစုပေါင်းရမှတ်များအတွက်မေးခွန်းလွှာမျှ subscale (လူတစ်ဦး-ယုတ်ရှိသည်ဟုမှတ်စရာ) ရှိခဲ့လျှင်ခဲ့ကြသည်။ 10% ကျော်လွန်ပျောက်ဆုံးနေတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုနှုန်းသည်နှင့်အတူဖြေဆိုသူဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ် (SEM) ကိုအများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေကိုခန့်မှန်းသုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ နှိုင်းယှဉ်ထိုက်မတန်အညွှန်းကိန်း (CFI) ၏တန်ဖိုးများကို .90, အχနီးစပ်ခဲ့ကြပါလျှင်ကိုက်ညီကောင်းသောဖြစ်စဉ်းစားခဲ့ကြ2/df2နှင့်နီးစပ်သောအချိုးအစားနှင့်အကြမ်းဖျင်းခန့်မှန်းချက်၏ root mean square square (RMSEA) <0.08 (Arbuckle & Wothke, 2003; Byrne, 2010; Hu & Bentler, 1999) ။ စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း software ကို TIBCO Statistica ™ 13.3.0 (TIBCO ဆော့ဝဲ Inc ကို, Palo Alto, CA, USA) နှင့် IBM ကသုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့ကြ® SPSS® အာမုတ်™ 23.00 (IBM က SPSS Software များ Inc ကို, Wexford, PA, USA) ။
အဆိုပါလေ့လာမှုဟယ်လ်စင်ကီ၏ကြေညာစာတမ်းနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဂျီနီဗာတက္ကသိုလ်ဆေးရုံ၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကော်မတီကလေ့လာမှု protocol ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုအွန်လိုင်းလေ့လာမှုရည်ရွယ်ချက်များနှင့်နည်းစနစ်များအပြည့်အဝဖော်ပြချက်ပေးထားခဲ့ကြသည်။ သူတို့ဟာပြီးတော့သူတို့ကို SurveyMonkey ကနေတဆင့်အမည်ဝှက်ပြီးမေးခွန်းဖြေဆိုခွင့်ပြုခဲ့ရာ, အွန်လိုင်း၎င်းတို့၏အသိပေးထားသောသဘောတူညီခကျြပေးဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။
ဖော်ပြရန်ရလဒ်များကိုဇယားအတွက်တင်ပြကြသည် 1။ အားလုံးဖြန့်ဝေပုံမှန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေနိုင်ပါသည်။ စားပှဲ 1 ထို့အပြင်အကြေးခွံများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရစမ်းသပ်ဖို့အသုံးပြုတဲ့ Cronbach ရဲ့αကိန်းပေးပါသည်။ ဒီမှာαကိန်း> .70 ဖြစ်တဲ့အခါကျေနပ်ဖွယ်ရာလို့ယူဆကြပါတယ်။ ဇယား2ကျား, မများကနည်းလမ်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုပြသထားတယ်။ အမျိုးသားများအတွက်ဘာတိုးမြှင့်စိတ်ရင်းအဘို့မိန်းမတို့သည်ထက်မြင့်မားသွင်းယူနှင့်လည်း (ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားနှင့်အတူ) dyadic နှင့်တိုက်ပိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသည်။ တစ်ခုတည်းပါဝင်သူတစ်ဦးအဖော်နှင့်အတူနေထိုင်နေသူတို့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်အခါ, dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ (41.64 vs. 46.23, များအတွက်သိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ရှိခဲ့ t = -2.73, p <.01, တစ် ဦး အလတ်စားအကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားနှင့်အတူ) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုအားဖြင့်နှိုင်းယှဉ်မှုများသည်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုများမတွေ့ရပါ။ သို့သော်လိင်ကွဲပြားမှုတွင်ပါ ၀ င်သောလိင်ဆန္ဒများကိုပိုမိုတင်ပြရန်နှင့် CIUS ရမှတ်များပိုမိုရရှိရန်အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းများရှိခဲ့သည်။
စားပွဲတင် 1 ။ CIUS, CMQ နှင့် SDI-2 ၏ဖော်ပြရန်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း
[95% CI] ဆိုလို
CIUS 19.54 [18.16-20.91] 19 12.20 0-51 0.19 -0.92 0.08 <.01 .93
CMQ တိုးမြှင့် 23.85 [23.04-24.66] 25 12.20 8-40 -0.36 -0.23 0.08 <.01 .88
CMQ လူမှုရေး 10.33 [9.91-10.74] 11 12.20 4-20 -0.15 -0.66 0.10 <.01 .72
ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း CMQ 12.70 [12.15-13.25] 13 12.20 5-25 0.06 -0.85 0.08 <.01 .81
SDI-2 64.25 [61.96-66.54] 67 20.34 0-109 -0.62 0.39 0.07 <.01 .91
SDI-2 dyadic 44.97 [43.48-46.47] 47 12.20 0-70 -0.88 1.07 0.08 <.01 .87
SDI-2 တိုက်ပိတ် 15.60 [14.61-16.59] 17 12.20 0-31 -0.32 -0.89 0.10 <.01 .93
မှတ်စု။ CIUS: compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းစကေး; CMQ: ဘာလှုံ့ဆော်မေးခွန်းလွှာ; SDI-2: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire Inventory-2; CI: ယုံကြည်မှုကြားကာလ; SD: စံသွေဖည်;d(KS): Kolmogorov-Smirnov စမ်းသပ်။
စားပွဲတင်2။ ကျား, မများက CIUS, CMQ နှင့် SDI-2 ရမှတ်များနှိုင်းယှဉ်
(Cohen ကိုရဲ့ d)
CIUS 19.30 (11.18) 19.76 (13.14) -0.04 -0.33 .740
CMQ တိုးမြှင့် 26.25 (6.66) 21.55 (7.01) 0.65 6.01 .001
CMQ လူမှုရေး 10.18 (3.47) 10.47 (3.90) -0.08 -0.67 .510
ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း CMQ 12.82 (4.81) 12.59 (4.93) 0.05 0.40 .690
SDI-2 71.89 (17.88) 56.90 (19.90) 0.74 6.92 .001
SDI-2 dyadic 48.35 (12.30) 41.73 (13.37) 0.50 4.51 .001
SDI-2 တိုက်ပိတ် 19.02 (7.64) 12.31 (8.64) 0.76 7.18 .001
မှတ်စု။ CIUS: compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းစကေး; CMQ: ဘာလှုံ့ဆော်မေးခွန်းလွှာ; SDI-2: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire Inventory-2; SD: စံသွေဖည်။
ကျနော်တို့အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြား CIUS ရမှတ်များမကွာခြားချက်ကိုတွေ့သောကြောင့်, ကျနော်တို့ (အနိမ့်အလယ်အလတ်နှင့်မြင့်မားသော) ကျဘာအသုံးပြုမှုများ၏ပြင်းထန်မှုအဆိုအရသူတို့ကဖြန့်ဝေခဲ့ကြပုံကိုစူးစမ်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ (tertiles အားဖြင့်) ကိုအုပ်စုသုံးစုအပေါငျးတို့သပါဝင်သူများ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ယောက်ျားအဓိကအားဖြင့်အလယ်အလတ်သုံးအုပ်စုတွင်ခဲ့ကြသည်သော်လည်းအမျိုးသမီးများ, နိမ့်နှင့်အမြင့်မား compulsive အသုံးပြုမှုအုပ်စုများအတွက်အများအားဖြင့်ဖြစ်ကြောင်းကိုပြသ (ဇယား 3).
စားပွဲတင်3။ နိမ့်အလယ်အလတ်နှင့်မြင့်မားသော CIUS ရမှတ်များနှင့်အတူကျဘာအသုံးပြုသူသုံးယောက်အုပ်စုများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ
အနိမျ့ CIUS ရမှတ် (n = ၂၀105)
အလတ်စား CIUS ရမှတ် (n = ၂၀102)
အမြင့် CIUS ရမှတ် (n = ၂၀99)
CIUS [ယုတ် (SD)] 6.05 (3.84) 19.48 (4.05) 33.89 (5.28)
CIUS (အကွာအဝေး) 0-12 13-26 27-51
အသက်အရွယ် [ယုတ် (SD)] 32.68 (11.17) 33.15 (11.90) 32.06 (9.27)
ချစ်သံယောဇဥ်ရှိပါတယ် 67.62% (n = ၂၀71) 75.49% (n = ၂၀77) 74.75% (n = ၂၀74)
လူတို့သညျ 46.67% (n = ၂၀49) 56.87% (n = ၂၀58) 43.43% (n = ၂၀43)
အမြိုးသမီးမြား 53.33% (n = ၂၀56) 43.14% (n = ၂၀44) 56.57% (n = ၂၀56)
လိင်ကွဲတိမ်းညွတ် 86.67% (n = ၂၀91) 84.31% (n = ၂၀86) 79.80% (n = ၂၀79)
လိင်တူဆက်ဆံသူ orientation ကို 3.81% (n = ၂၀4) 6.86% (n = ၂၀7) 3.03% (n = ၂၀3)
ရိုးရိုးတိမ်းညွတ် 9.52% (n = ၂၀10) 8.82% (n = ၂၀9) 17.17% (n = ၂၀17)
မှတ်စု။ CIUS: compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းစကေး; SD: စံသွေဖည်။
စားပှဲ4CIUS ရမှတ်များနှင့် CMQ နှင့် SDI-2 subscores အကြားဆက်စပ်မှုတွေ့ရမယ်။ အဆိုပါရလဒ်များ subscales ၏ရှိသမျှနှင့်အတူသိသာနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်စပ်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ အင်အားအကောင်းဆုံးဆက်ဆံရေးကို (CMQ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစိတ်ရင်းများအတွက် CIUS ရမှတ်များနှင့်ရမှတ်များအကြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်r = .52, p <.001) နှင့် CMQ လူမှုရေးစိတ်ရင်း (r = .39, p <.001) နှင့် CIUS ရမှတ်နှင့်တိုးမြှင့်စိတ်ရင်းရမှတ်အကြားနည်းနည်းအတိုင်းအတာအထိ (r = .28, p <.001) ။
စားပွဲတင်4။ CIUS, CMQ နှင့် SDI-2 ရမှတ်များအကြားဆက်စပ်မှု
CIUS 1 .28 *** .39 *** .52 *** .16 ** .15 ** .14 *
CMQ တိုးမြှင့် 1 .28 *** .55 *** .56 *** .44 *** .55 ***
CMQ လူမှုရေး 1 .58 *** .16 ** .17 ** .10
ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း CMQ 1 .22 *** .20 *** .19 **
SDI-2 1 .91 *** .79 ***
SDI-2 dyadic 1 .48 **
SDI-2 တိုက်ပိတ် 1
မှတ်စု။ CIUS: compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းစကေး; CMQ: ဘာလှုံ့ဆော်မေးခွန်းလွှာ; SDI-2: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire Inventory-2 ။
*p <.05 ။ **p <.01 ။ ***p <.001
စားပှဲ5ကျား, မအားဖြင့်ဆက်စပ်မှုတွေ့ရမယ်။ အမြိုးသမီးမြားအဘို့, CMQ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစိတ်ရင်းများအတွက် CIUS ရမှတ်များနှင့်ရမှတ်များအကြားသိသိသာသာဆက်ဆံရေးမျိုး (ရှိခဲ့r = .51, p <.001) နှင့် CMQ လူမှုရေးစိတ်ရင်း (r = .49, p <.001) နှင့် CIUS ရမှတ်နှင့် CMQ တိုးမြှင့်စိတ်ရင်းရမှတ်အကြားနည်းနည်းအတိုင်းအတာအထိ (r = .34, p <.001) ။ မှတ်သားစရာမှာ CIUS ရမှတ်နှင့်လိင်အလိုဆန္ဒ subscales အကြားစာရင်းအင်းဆိုင်ရာသိသာထင်ရှားသည့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။
စားပွဲတင်5။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင် CIUS, CMQ နှင့် SDI-2 ရမှတ်များအကြားဆက်စပ်မှု
အမျိုးသား / အမြိုးသမီးမြား
CIUS .26 *** .25 *** .54 *** .30 *** .25 *** .28 ***
CMQ တိုးမြှင့် .34 *** .08 .47 *** .44 *** .29 *** .49 ***
CMQ လူမှုရေး .49 *** .50 *** .41 *** .05 .09 -.03
ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း CMQ .51 *** .65 *** .74 *** .15 .09 .18 **
SDI-2 .09 .55 *** .29 *** .30 *** .91 *** .76 ***
SDI-2 dyadic .09 .48 *** .27 ** .29 *** .91 *** .42 ***
SDI-2 တိုက်ပိတ် .07 .48 *** .23 *** .21 *** .76 *** .44 ***
မှတ်စု။ အဆိုပါထောင့်ဖြတ်၏အောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းကိုယောက်ျားနှင့်မိန်းမအဘို့အအထက်ပိုင်းများအတွက်ဆက်စပ်မှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ CIUS: compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းစကေး; CMQ: ဘာလှုံ့ဆော်မေးခွန်းလွှာ; SDI-2: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire Inventory-2 ။
**p <0.01 ။ ***p <.001
လူတို့သညျအဘို့, ကျနော်တို့ CIUS ရမှတ်အကြားသိသိသာသာဆက်ဆံရေးဟာလေ့လာတွေ့ရှိနှင့် CMQ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစိတ်ရင်း (ဂိုးသွင်းr = .54, p <.001) နှင့်လည်း, အခြားအ CMQ ရည်ရွယ်ချက်က subscales များအတွက် CIUS ရမှတ်များနှင့်ရမှတ်များအကြား, တစ် ဦး နည်းပါးအတိုင်းအတာအထိဆိုသော်င။ အမျိုးသမီးများနှင့်မတူဘဲကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးသားများ၏ CIUS ရမှတ်များနှင့်နှစ် ဦး စလုံးအကြားဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်r = .28, p <.001) နှင့် dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ (r = .25, p <.001) ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့တိုင်းတာ variable တွေကို (CIUS, CMQ နှင့် SDI-2) နှင့်၎င်းတို့၏အလှနျမှီခိုအကြားဆက်ဆံရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန် SEM ကောက်ယူ (ပုံ 1) ။ အဆိုပါကိုက်ညီတဲ့များ၏တန်ဖိုးများကိုလက်ခံနိုင်ဖွယ် (χများမှာ2/df = 3.01, CFI = 0.80 နှင့် RMSEA = 0.08) ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်သီးခြားစီလုပ်ဆောင်ခဲ့သည် (ပုံများကိုကြည့်ပါ)2နှင့် 3) ။ လူတို့သညျအဘို့ CFI တန်ဖိုး (0.74) အနိမ့်ခဲ့သည်။ ဂဏန်း 1 အဆိုပါ CIUS ရမှတ်များနှင့် CMQ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစိတ်ရင်းနှင့် CMQ လူမှုရေးစိတျရငျးအကြားအသင်းအဖွဲ့ပြသထားတယ်။ ဒါဟာအစ CMQ တိုးမြှင့်စိတ်ရင်းနဲ့ SDI-2 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအကြားလင့်များ၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ယောက်ျား, ပုံများအတွက်2အဆိုပါ CMQ အကြားအသင်းအဖွဲ့ SDI-2 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမှလင့်များနှင့်အတူ, စိတ်ရင်းနှင့် CIUS ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပြသထားတယ်။ ဂဏန်း3အမြိုးသမီးမြားအတှကျ CIUS နှင့်အတူ CMQ လူမှုရေးနှင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစိတ်ရင်း၏အသင်းအဖွဲ့မီးမောင်းထိုးပြ။
ပုံ 1 ။ အဆိုပါ compulsive ကျဘာ၏အသုံးပြုမှုကို (compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းစကေးရမှတ်), ဘာရည်ရွယ်ချက်တွေ (ကျဘာလှုံ့ဆော် subscales Questionnaire), နှင့်တပြင်လုံးကိုနမူနာ (ယောက်ျားမိန်းမတို့) အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire Inventory-2 subscales) အကြားဆက်ဆံရေး။ *p <.05 ။ **p <.01 ။ ***p <.001 χ2 = 2,295.60, df = 764, χ2/df = 3.01, p <.001, CFI = 0.80 နှင့် RMSEA = 0.08 [0.08-0.09] ။ ဖတ်လို့ရအောင်အဘို့, သာငုပ်လျှိုးနေ variable တွေကိုတင်ပြနေကြသည်
ပုံ2။ လူတို့သညျအဘို့ဘာ (compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းစကေးရမှတ်), ဘာရည်ရွယ်ချက်တွေ (ကျဘာလှုံ့ဆော် subscales Questionnaire) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ compulsive အသုံးပြုမှုအကြားဆက်ဆံရေး (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire Inventory-2 subscales) ။ *p <.05 ။ **p <.01 ။ ***p <.001 χ2 = 1,617.37, df = 764, χ2/df = 2.12, p <.001, CFI = 0.74 နှင့် RMSEA = 0.09 [0.08-0.09] ။ ဖတ်လို့ရအောင်အဘို့, သာငုပ်လျှိုးနေ variable တွေကိုတင်ပြနေကြသည်
ပုံ3။ မိန်းမတို့အဘို့ဘာ (compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းစကေးရမှတ်), ဘာရည်ရွယ်ချက်တွေ (ကျဘာလှုံ့ဆော် subscales Questionnaire) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ compulsive အသုံးပြုမှုအကြားဆက်ဆံရေး (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire Inventory-2 subscales) ။ *p <.05 ။ **p <.01 ။ ***p <.001 χ2 = 1,650.29, df = 766, χ2/df = 2.15, p <.001, CFI = 0.80 နှင့် RMSEA = 0.09 [0.08-0.09] ။ ဖတ်လို့ရအောင်အဘို့, သာငုပ်လျှိုးနေ variable တွေကိုတင်ပြနေကြသည်
လေ့လာမှု၏ရလဒ်များ CIUS ရမှတ်များအတွက်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုထုတ်ဖေါ်ဘူး, ဒါပေမဲ့သူတို့မိန်းမများသင်တန်းသားများကိုအများအားဖြင့်နိမ့်-အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ် high-အသုံးပြုမှုအုပ်စုသည်ဖြစ်စေရှိပြပွဲကိုပြု၏။ ကျား, မခြားနားချက်များ၏မရှိခြင်းဥပမာ (ယခင်အလုပ်နှင့်ကိုက်ညီသည်မဟုတ်, Kafka, 2010) ။ high-အန္တရာယ်အုပ်စုတွင်အမျိုးသမီးများ၏လူမျိုးကွဲများ၏ရှေ့မှောက်တွင်, (အမူအကျင့်စွဲလမ်းပေါ်ရှိအခြားလေ့လာမှုများနှင့်အတူသို့သော်တသမတ်တည်းဖြစ်တယ်Khazaal et al ။ , 2017), အမြိုးသမီးမြား၏ subsamples အပြုအမူစှဲတိုးမြှင့်အန္တရာယ်မှာဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း။
ကျနော်တို့လိင်-related ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ဖိုရမ်များမှတဆင့်သင်တန်းသားများကိုစုဆောင်းသောကြောင့်, လေ့လာမှု (က Self-Selection ကိုဘက်လိုက်မှုမှဖြစ်နိုင်သည်ဘာသာရပ်ခဲ့သည်Khazaal et al ။ , 2014) ။ ဘာအသုံးပြုမှုမြင့်မားသောအဆင့်များနှင့်လူမျိုး၏ Overinclusion ဖယ်ထုတ်ထားရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ epidemiological ကောက်အရှင်လေ့လာမှုကနေရေးဆွဲမရနိုင်ပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာရလဒ် variable တွေကိုတစ်နံပါတ်နှင့်ဒီနမူနာများတွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ CIUS ရမှတ်များအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ကိုမီးမောင်းထိုးပြ။
ရလဒ်နှစ်ခုလုံးကိုလိင်၌၎င်း, compulsive ကျဘာအတွက်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အချို့သောအတိုင်းအတာအထိလူမှုရေးစိတျရငျး, ရန်, CMQ ဖြေရှင်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ CMQ တိုးမြှင့်စိတ်ရင်းအထူးသဖြင့်လူတို့သညျအဘို့, CIUS ရမှတ်များနှင့်အတူငယ်လေးတစ်အသင်းအဖွဲ့ပြသခဲ့သည်။
ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်းစိတ်ရင်းတစ်ဦးချင်းစီဆန္ဒရှိအခြေအနေများ၏မျက်နှာကိုကျ၌ထသတ်မှတ်ကြောင်းမဟာဗျူဟာများ (ဥပမာ, မှလွတ်မြောက်ရန်ရည်ညွှန်း Barrault et al ။ , 2016; Miner, Coleman, Center, Ross, & Rosser, 2007) ။ သူတို့ကလူတွေကိုနာကျင်အချိန်လေးအတွင်းမှာယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းကိုကူညီရှာဖွေပေမည် (Coleman-Kennedy & Pendley, 2002; Leiblum, 1997) ။ အဆိုပါလေ့လာမှုရလဒ်တွေကိုထိုကဲ့သို့သောရည်ရွယ်ချက်များအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးအတွက် compulsive ကျဘာနဲ့ဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက် (ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုအပေါ်ကအခြားလေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်Blevins, Banes, Stephens, Walker နှင့် Roffman, 2016; Grazioli et al ။ , 2018) နှင့်အခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်း (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2014; Clarke et al ။ , 2007; Khazaal et al ။ , 2018) အဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောကျဘာအတွက်အနုတ်လက္ခဏာအကြားအပြန်အလှန်ထိခိုက်စေခြင်းလေ့လာမှုများနှင့် Impulse နှင့်အတူ (Wéry et al ။ , 2018) ။ ဒီလေ့လာမှုမှာ CMQ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစိတ်ရင်းလည်းနှစ်ဦးစလုံးလိင်အတွက် CIUS အပေါ်အပြင်းထန်ဆုံးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးလက်တွေ့အဆင့်မှာအဲဒီရလဒ်တွေကိုအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောကျဘာကြောင့်လူကိုကူညီစိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်းအာရုံစိုက်ကြောင်းကြားဝင်၏အရေးပါမှုကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုများ (ကျဘာ၏ compulsive အသုံးပြုမှုအကြားဖြစ်နိုင်ခြေပြုပြီအဖြစ်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်သိမြင်မှုမျှော်လင့်ထားကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းအပါအဝင်မှအကျိုးစေခြင်းငှါကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2014; Laier, Wegmann, & အမှတ်တံဆိပ်, 2018).
(အမူအကျင့်စွဲလမ်းပေါ်ရှိအခြားလေ့လာမှုများ၌ရှိသကဲ့သို့Müller et al ။ , 2017) နှင့်စွဲလမ်းကျဘာ (Weinstein, Zolek, Babkin, Cohen, & Lejoyeux, 2015), လေ့လာမှုအချို့အရေးကြီးသောကျား, မကွဲပြားမှုပြသခဲ့သည်။ ပိုများသောအထူးသ, လူမှုရေးစိတ်ရင်းပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ယောက်ျားသည်ထက်မိန်းမတို့အဘို့ CIUS ရမှတ်များနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သညျ။ ဤ (လူမှုကွန်ယက်များတွင်အမျိုးသမီးများပိုမိုမြင့်မားပါဝင်ပတ်သက်မှုဖေါ်ပြခြင်းနဲ့အခြားလေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်Dufour et al ။ , 2016) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအမျိုးသမီး CIUS ရမှတ်များနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့မတွေ့ရှိခဲ့သည်တစ်ခုအသင်းအဖွဲ့သော်လည်း, အသေးစားဆိုသော်ငြားယောက်ျားအဘို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။
အဆိုပါ CIUS ရမှတ်များနှင့်အခြား variable တွေကိုအကြားအပြင်းထန်ဆုံးအသင်းအဖွဲ့အရေးအကြီးဆုံးကတော့အဆိုပါ CMQ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစိတ်ရင်းအဘို့နှစ်ခုလုံးကိုလိင်အတွက်ပြသခံခဲ့ရပေမယ့်, သေးငယ်တဲ့အသင်းအဖွဲ့လူတို့တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအဘို့နှင့်အမျိုးသမီးအကြားလူမှုရေးစိတျရငျးအဘို့ရှုလေ့လာခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ဖြစ်နိုင်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအတွက်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအကြားထပ်တူထပ်မျှ (ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းCarvalho & Nobre, 2011) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမှသာကျဘာ၏အထီးသင်တန်းသားများကို '' compulsive အသုံးပြုမှုအတွက်အချက်လမျး၌ကျား, မကွဲပြားမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအပေါ်လိင်လုပ်ရပ်များ၏ဆက်ဆံရေးနှင့်လူမှုရေးရှုထောင့် (ချိတ်ဆက်စေခြင်းငှါခဲ့ကွောငျးအဆိုပါတွေ့ရှိချက်Carvalho & Nobre, 2011).
ထိုကဲ့သို့သောကျား, မကွဲပြားမှုများအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ (ယောက်ျား၌) သာသေးငယ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍ, ဒါမှမဟုတ် compulsive ကျဘာအသုံးပြုမှုအတွက် (အမျိုးသမီး) ပင်အဘယ်သူမျှမအခန်းကဏ္ဍကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထို့ပြင် CMQ တိုးမြှင့် subscale အဆိုပါ CIUS ရမှတ်အထောက်အကူပြုဖို့မထင်ထားဘူး။ ဒါကဘာစွဲလိင်အားဖြင့်သာယောက်ျားအတွက်သေးငယ်တဲ့အတိုင်းအတာအထိမောင်းနှင်မဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက် (ထိုအကြိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဒီယိုများဖေါ်ပြခြင်းနဲ့အခြားလေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်Voon et al ။ , 2014) နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ (ဆိုလိုသည်မှာလိင်ဆက်ဆံမှုအရေအတွက်၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောဆိုက်ဘာဆက်စ်အသုံးပြုခြင်း) သည်မလိုက်နာသောဆိုက်ဘာဆက်စ်နှင့်မပတ်သက်ပါ။Laier et al ။ , 2014; Laier, Pekal, & Brand, 2015) ။ စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားလေ့လာမှုများတွင်အကြံပြုထားသည့်အတိုင်း“ liking” အတိုင်းအတာ (hedonic drive) သည်“ လိုသော” (မက်လုံးပေးလွန်းခြင်း) နှင့်“ သင်ယူခြင်း” အတိုင်းအတာများ (ဥပမာကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အသင်းအဖွဲ့များနှင့်သိမှတ်ခံစားမှုများဥပမာအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုအကြောင်းကိုလေ့လာခြင်း) ထက် ပို၍ သေးငယ်သောအခန်းကဏ္ play မှပုံရသည် cybersex ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါကယ်ဆယ်ရေး; Berridge, ရော်ဘင်ဆင်, & Aldridge, 2009; ရော်ဘင်ဆင် & Berridge, 2008).
ပထမတစ်ချက်မှာ cybersex တွင်လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်တိုးမြှင့်မှုရည်ရွယ်ချက်များ၏သေးငယ်သောအခန်းကဏ္ counter သည်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသည်။ ဒါဟာဆန္ဒပြည့်၏လိင်သဘာဝအပြုအမူ၏အဓိကမောင်းနှင်မဟုတ်ကြောင်းပုံရသည်။ ဤလေ့လာတွေ့ရှိချက်သည် CIUS သည်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ် cybersex အသုံးပြုခြင်းအတွက်မဟုတ်ဘဲ compulsive cybersex အသုံးပြုမှုကိုတိုင်းတာသည်ဟူသောအချက်အားဖြင့်ရှင်းပြနိုင်သည်။ တွေ့ရှိချက်များသည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ စိတ်ကျေနပ်မှုမှ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ရိုက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုရှာဖွေခြင်း) မှလျော်ကြေးပေးခြင်းသို့ပြောင်းလဲခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာအပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ဓာတ်များမှလွတ်မြောက်ရန်ရှာဖွေခြင်း) ဖြင့်စွဲလမ်းမှုအားဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်ကိုအပြီးသတ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ လူငယ် & အမှတ်တံဆိပ်, 2017) ။ နောက်ထပ်ဤမေးခွန်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အနာဂတ်လေ့လာမှုများအတူတူဘာအသုံးပြုမှုကာလအတွင်းရရှိသောဆုလာဘ်၏သဘောသဘာဝနှင့်အတူ, ကျဘာအသုံးပြုမှု concomitant အကဲဖြတ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့် compulsive ကျဘာမြားပါဝငျသငျ့သညျ။ ဂေဟစနစ်ဒင်္အကဲဖြတ်ဤမေးခွန်းများကိုစူးစမ်းဖို့အသုံးပြုနိုင် (Benarous et al ။ , 2016; Ferreri, Bourla, Mouchabac, & Karila, 2018; ဂျုံးစ်, Tiplady, Houben, Nederkoorn, & Field, 2018).
ဤလုပ်ငန်းတွင်ကဏ္sectionပေါင်းစုံပါ ၀ င်သောဒီဇိုင်း၊ ကိုယ်တိုင်အကဲဖြတ်မေးခွန်းလွှာများ၊ ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်သောဘက်လိုက်မှုများနှင့်အဆင်ပြေသောနမူနာအရွယ်အစားများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ရလဒ်များကိုအနာဂတ်လေ့လာမှုများမှအတည်ပြုသင့်သည်။ ပါဝါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်နမူနာအရွယ်အစားစီစဉ်ခြင်း၊ ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုအသုံးပြုခြင်း (ဥပမာ၊ ညစ်ညမ်းခြင်း၊ ချိန်းတွေ့ခြင်း၊ ဝက်ဘ်ကင်မရာနှင့်စကားဝှက်) အသုံးပြုခြင်း၏အသေးစိတ်အကဲဖြတ်မှုများသို့မဟုတ်တိကျသောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤလေ့လာမှုတွင်ဆိုက်ဘာဆက်စ်အတွက်အဆင်ပြေသော CIUS သည်ကောင်းမွန်သောအတွင်းပိုင်းကိုက်ညီမှုကိုပြသည် (Cronbach ၏α = .93) ၎င်းသည်အတင်းအကျပ်ပြုကျင့်သောလိင်မှုကိုတိုင်းတာသည်၊ သို့သော်ဆိုက်ဘာဆက်ဆံကိုသူကိုယ်တိုင်အသုံးပြုခြင်းကိုအကဲဖြတ်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ နောက်ထပ်လေ့လာမှုများတွင်ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများ၊ ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောရရှိနိုင်သည့်ဆုလာဘ်များ၊ အင်တာနက်မဟုတ်သောလိင်ဆိုင်ရာပါဝင်ပတ်သက်မှု (ဥပမာလိင်ဆက်ဆံခြင်းစသည်) နှင့်မိတ်ဖက်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုတို့ကိုအကဲဖြတ်သင့်သည်။
ထိုကဲ့သို့သော Self-လေးစားမှု, ခံစားချက်အဖြစ်ထပ်မံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ variable တွေကို, (ပန်းခြံ, ဟောင်ကောင်, ပန်းခြံ, Ha, & Yoo, 2012), Impulse (Wéry et al ။ , 2018), အထီးကျန်ဆန် (Khazaal et al ။ , 2017; Yong, Inoue, & Kawakami, 2017), ပူးတွဲမှု (Favez, Tissot, Ghisletta, Golay, & Cairo Notari, 2016), နှင့်စိတ်ရောဂါ comorbidities (Starcevic & Khazaal, 2017), ကိုမှန်ကန်အသက်တာ၌စိတ်ခံစားမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအပြင်, compulsive ကျဘာအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှဖြစ်နိုင်သည်။
YK, FB-D ကိုနှင့် SR လေ့လာမှုအယူအဆနှင့်ဒီဇိုင်းအတွက်လှူဒါန်းခဲ့သည်။ FBB, RC, SR နှင့် YK စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အချက်အလက်များ၏အနက်အတွက်လှူဒါန်းခဲ့သည်။ YK စုဆောင်းမှုအတွက်လှူဒါန်းခဲ့သည်။ FBB, FB-D ကို, RC နှင့် YK လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ရေးဆွဲရေးအတွက်လှူဒါန်းခဲ့သည် SR ။
အဆိုပါစာရေးဆရာများအင်္ဂလိပ်ဘာသာတည်းဖြတ်ရေးအဘို့ဘာဘရာတိုင်း, ELS, ဇီဝဆေးပညာ Editor ကို၎င်း, အဲလစ်ဇဘက် Yates ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ သူတို့ကအစလေ့လာမှုသင်တန်းသားများကိုကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။
မစ္စအောလ်ဘရိုက်, ဂျေအမ် (2008). အွန်လိုင်း America မှာလိင်: အင်တာနက်ကိုလိင်ရှာနှင့်၎င်း၏သက်ရောက်မှုရှိလိင်၏တူးဖော်ရေး, အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာ။ အဆိုပါလိင်သုတေသနဂျာနယ်, 45 (2), 175-186။ Doi:https://doi.org/10.1080/00224490801987481 Crossref, Medline, Google Scholar
Allen က, A., Kannis-Dymand, L., & Katsikitis, M. (2017). ပြဿနာကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု: တဏှာ, အလိုဆန္ဒအတှေးအချေါမြားနှငျ့ metacognition များ၏အခန်းကဏ္ဍ။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 70, 65-71။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2017.02.001 Crossref, Medline, Google Scholar
Arbuckle, ဂျေအယ်လ်, & Wothke, W. (2003) ။ Amos (ဗားရှင်း 5.0) [ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲကို] ။ ချီကာဂို, IL: SmallWaters ကော်ပိုရေးရှင်း. Google Scholar
Barrault, S., Hegbe, K., Bertsch, I., & Courtois, R. (2016). relation entre les က de traumatiques de l'enfance, le ဒုက္ခက de personnalitéနယ်စပ်ဒေသ et les ပြွန် cybersexuelles problématiquesတုévénements [ကလေးဘဝ, နယ်စပ်ဒေသကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါနှင့်ပြဿနာ cybersexual အပြုအမူများစိတ်ထိခိုက်ဘဝဖြစ်ရပ်များအကြားဆက်ဆံရေး] ။ စိတ်ကို, 22 (3), 65-81။ Doi:https://doi.org/10.3917/psyt.223.006510.3917/psyt.223.0065 Crossref, Google Scholar
Benarous, X., Edel, Y., Consoli, A., Brunelle, J., Etter, J.-F., Cohen ကို, D., & Khazaal, Y. (2016). ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့် comorbid ပြင်းထန်စိတ်ရောဂါမမှန်နှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်အတွက်ဂေဟစနစ်ဒင်္အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်စမတ်ဖုန်း application ကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု: လေ့လာမှု protocol ကို။ စိတ်ရောဂါကုသမှု,7အတွက်နယ်စပ်ဒေသ 157။ Doi:https://doi.org/10.3389/fpsyt.2016.00157 Crossref, Medline, Google Scholar
Benschop, A., Liebregts, N., ဗန် der Pol, P., Schaap, R., Buisman, R., ဗန် Laar, M., ဗန်တွင်းချောက်ကမ်းပါး, W., က de Graaf, R., & Korf, J. ဂျေ (2015). ဆေးခြောက်မှီခိုနှင့်အတူငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမကြာခဏဆေးခြောက်အသုံးပြုသူများနှင့်အသင်းအဖွဲ့များတို့တွင်ဆေးခြောက်သုံးခြင်းလှုံ့ဆျောမှုတိုင်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်တရားဝင်မှု။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 40, 91-95။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2014.09.003 Crossref, Medline, Google Scholar
Berridge, ကေစီ, ရော်ဘင်ဆင်, တီအီး, & Aldridge, ဂျေဒဗလျူ (2009). ချက်ကိုပိုင်းခြားစိတ်ဖြာဆုလာဘ်၏အစိတ်အပိုင်းများ: 'Like', 'လို' နှင့်သင်ယူမှု။ ဆေးဝါးဗေဒ,9(1) တွင်လက်ရှိထင်မြင်ချက်, 65-73။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.coph.2008.12.014 Crossref, Medline, Google Scholar
Beutel, အမ်အီး, Giralt, S., Wölfling, K., Stöbel-ရစ်ချတာ, Y., Subic-Wrana, C., ရိုင်နာ, I., တိဗက် အေအက်စ်, & Brähler, E. (2017). ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဂျာမန်လူဦးရေတွင်အွန်လိုင်း-လိင်အသုံးပြုမှုဆုံးအဖွတျ။ PLoS တစ်ခုမှာ, 12 (6), e0176449။ Doi:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176449 Crossref, Medline, Google Scholar
Billieux, J., Chanal, J., Khazaal, Y., Rochat, L., ဂေး, P., Zullino, D., & ဗန် der Linden, M. (2011). လွန်ကဲကဲ multiplayer အွန်လိုင်းအခန်းကဏ္ဍ-ကစားဂိမ်းအတွက်ပြဿနာပါဝင်ပတ်သက်မှု၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန့်မှန်း: အထီးချက်တွေကိုဆိုင်ဘာကဖေးကစားသမားတစ်နမူနာပုံဥပမာ။ Psychopathology, 44 (3), 165-171။ Doi:https://doi.org/10.1159/000322525 Crossref, Medline, Google Scholar
Blevins, စီအီး, Banes, ကေအီး, စတီဖန်, R. S., Walker က, D. D., & Roffman, R. အေ (2016). အဆိုပါဘက်စုံဆေးခြောက်သုံးခြင်းစိတ်ရင်းမေးခွန်းလွှာတစ်ခုတည်ဆောက်ပုံ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် utility ကို: မိုးသည်းထန်စွာ-သုံးပြီးအထက်တန်းကျောင်းသားများအကြားဆေးခြောက်အသုံးပြုမှုအတွက်စိတ်ရင်း။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 57, 42-47။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2016.02.005 Crossref, Medline, Google Scholar
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, M., Laier, C., Pawlikowski, M., Schächtle, U., Schöler, T., & Altstötter-Gleich, C. (2011). အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအကဲခတ်: အလွန်အကျွံအင်တာနက်ကိုလိင်က်ဘ်ဆိုက်များကို အသုံးပြု. များအတွက်လိင်စိတ်နိုးထ ratings နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ-စိတ်ရောဂါလက္ခဏာတွေအခန်းက္ပ။ Cyberpsychology, အပြုအမူ, နှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့, 14 (6), 371-377။ Doi:https://doi.org/10.1089/cyber.2010.0222 Crossref, Medline, Google Scholar
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, M., Laier, C., & လူငယ်တို့, ကေအက်စ် (2014). အင်တာနက်စွဲ: ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းစတိုင်များ, မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ကုသမှုဂယက်ရိုက်။ စိတ်ပညာအတွက်နယ်စပ်ဒေသ, 5, 1256။ Doi:https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.01256 Crossref, Google Scholar
Byrne, ခအမ် (2010) ။ အာမုတ်နှင့်အတူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်: အခြေခံပညာသဘောတရားများ, application များနှင့်ပရိုဂရမ်းမင်း (ed 2nd ။). နယူးယောက်, နယူးယော့: Routledge. Google Scholar
Carvalho, J., & Nobre, P. (2011). လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု: ဘယ်လိုစိတ်ခံစားမှုနဲ့ဆက်ဆံရေးဟာအချက်များကျားသည်နှင့်အညီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒဆုံးဖြတ်ရန်သလဲ? Sexologies, 20 (4), 207-211။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.sexol.2011.08.010 Crossref, Google Scholar
Clarke, D., စီ, S., အက်ဘော့, အမ်ဒဗလျူ, Townsend, S., Kingi, P., & Manaia, W. (2007). ရောဂါဗေဒနှင့် Non-ပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေတစ်ဦးရောနှောတိုင်းရင်းသားအသိုင်းအဝိုင်းနမူနာထဲမှာလောင်းကစားဝိုင်းစတင်များနှင့်ဆက်လက်ဘို့အကြောင်းပြချက်။ နိုင်ငံတကာလောင်းကစားလေ့လာရေး,7(3), 299-313။ Doi:https://doi.org/10.1080/14459790701601455 Crossref, Google Scholar
Coleman-ကနေဒီ, C., & Pendley, A. (2002). လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ရောဂါ။ အမေရိကန်စိတ်ရောဂါသူနာပြုများအစည်းအရုံး, 8 (5) ၏ဂျာနယ်, 143-151။ Doi:https://doi.org/10.1067/mpn.2002.128827 Crossref, Google Scholar
ဥရောပ Communities ၏ကော်မရှင်။ (2002). eEurope 2002: ကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်စပ်သော websites များအတွက်အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအင်တာနက်ကိုသုတေသနဂျာနယ်,4(3), E15။ Doi:https://doi.org/10.2196/jmir.4.3.e15 Medline, Google Scholar
Döring, N. အမ် (2009). လိင်အပေါ်ကိုအင်တာနက်ရဲ့သက်ရောက်မှု: သုတေသန 15 နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးကဝေဖန်သုံးသပ်မှု။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာ, 25 (5), 1089-1101။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.chb.2009.04.003 Crossref, Google Scholar
Dosch, A., Rochat, L., Ghisletta, P., Favez, N., & ဗန် der Linden, M. (2016). လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များ: တစ်ဦးက Multi-factorial ရှုထောင့်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, 45 (8) ၏မော်ကွန်း, 2029-2045။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-014-0467-z Crossref, Medline, Google Scholar
ဒေါင်းနင်း, အမ်ဂျေ, Antebi, N., & Schrimshaw, အီးဒဗလျူ (2014). အင်တာနက်ကို-based လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာများ၏ compulsive အသုံးပြုမှု: အ compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းစကေး၏လိုက်လျောညီထွေနှင့် validation ကို (CIUS)။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 39 (6), 1126-1130။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2014.03.007 Crossref, Medline, Google Scholar
Dufour, M., Brunelle, N., Tremblay, J., Leclerc, D., Cousineau, M.-M., Khazaal, Y., Légaré, အေအေ, ရူးဆိုး, M., & Berbiche, D. (2016). ကွိဘက်အထက်တန်းကျောင်းသားများအကြားကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်အင်တာနက်ပြဿနာများအတွက်ကျားခြားနားချက်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု, 61 ၏ကနေဒါဂျာနယ် (10), 663-668။ Doi:https://doi.org/10.1177/0706743716640755 Crossref, Medline, Google Scholar
Favez, N., Tissot, H., Ghisletta, P., Golay, P., & ကိုင်ရို Notary, S. (2016). ပိတ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး-Revised (ECR-R) အရွယ်ရောက်ရိုမန်းတစ်နှောင်ကြိုးမေးခွန်းလွှာအတွက်အတွေ့အကြုံများ၏ပြင်သစ်ဗားရှင်း validation။ စိတ်ပညာ၏ဆွစ်ဇာလန်ဂျာနယ်, 75 (3), 113-121။ Doi:https://doi.org/10.1024/1421-0185/a000177 Crossref, Google Scholar
Ferreri, F., Bourla, A., Mouchabac, S., & Karila, L. (2018). E-Addictology: စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကွားအသစ်နည်းပညာများခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု,9အတွက်နယ်စပ်ဒေသ 51။ Doi:https://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00051 Crossref, Medline, Google Scholar
ဖရန့်, E., Khazaal, Y., Jasiowka, K., နူ, T., Bianchi-Demicheli, F., & Rothen, S. (2018). အဆိုပါဘာလှုံ့ဆော်မေးခွန်းလွှာများ factor ဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်,7(3), 601-609။ Doi:https://doi.org/10.1556/2006.7.2018.67 လင့်ခ်, Google Scholar
Frangos, C. C., Frangos, C. C., & Sotiropoulos, I. (2010). ဂရိတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားပြဿနာကိုအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို: အန္တရာယ်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်၏အကြောင်းရင်းများ, ညစ်ညမ်းက်ဘ်ဆိုက်များ, နှင့်အွန်လိုင်းဂိမ်းတွေနဲ့ထုံးစံ Logistic ဆုတ်ယုတ်။ Cyberpsychology, အပြုအမူ, နှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့, 14 (1-2), 51-58။ Doi:https://doi.org/10.1089/cyber.2009.0306 Crossref, Medline, Google Scholar
Grazioli, V. S., Bagge, C. L., စတူဒီယို, J., Bertholet, N., Rougemont-ခေါ, A., Mohler-Kuo က M., Daeppen, ဂျေခ, & gmel, G. (2018). စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများ, အရက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသောက်သုံးစိတ်ရင်း: ငယ်ရွယ်လူတို့တွင်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေရန်ကြိုးစားခြင်းမှအမျိုးမျိုးသောလမ်းကြောင်းဆန်းစစ်ပါ။ အကျိုးသက်ရောက်စေ Disorders ၏ဂျာနယ်, 232, 243-251။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.02.028 Crossref, Medline, Google Scholar
Grov, C., Gillespie, ခဂျေ, ရွိုင်း T., & လီဗာ, J. (2011). လိင်ကွဲဆက်ဆံရေးအပေါ်ပေါ့ပေါ့အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများရိပ်မိအကျိုးဆက်များ: တစ်ဦးကအမေရိကန်အွန်လိုင်းစစ်တမ်းကောက်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, 40 (2) ၏မော်ကွန်း, 429-439။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-010-9598-z Crossref, Medline, Google Scholar
Grubbs, ဂျေခ, Volk, F., Exline, ဂျေဂျေ, & Pargament, ကေဗြဲ (2015). အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု: ခံစားစွဲ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်အကျဉ်းအတိုင်းအတာ၏အတညျပွု။ လိင်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 41 (1), 83-106။ Doi:https://doi.org/10.1080/0092623X.2013.842192 Crossref, Medline, Google Scholar
ဟူ, L., & Bentler, P. အမ် (1999). အသစ်ကအခြားရွေးချယ်စရာနှိုင်းယှဉ်သမားရိုးကျစံ: covariance ဖွဲ့စည်းပုံမှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၌လျောက်ပတ်အညွှန်းကိန်းများအတွက် Cutoff စံ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လင်း: တစ်ဦးက Multidisciplinary ဂျာနယ်,6(1), 1-55။ Doi:https://doi.org/10.1080/10705519909540118 Crossref, Google Scholar
ဂျုံးစ်, A., Tiplady, B., Houben, K., Nederkoorn, C., & ဖျော်ဖြေမှု, M. (2018). inhibitory ထိန်းချုပ်နေ့စဉ်အတက်အကျအရက်သောက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းသလား? တစ်ဦးဂေဟစနစ်ဒင်္အကဲဖြတ်လေ့လာမှု။ Psychopharmacology, 235 (5), 1487-1496။ Doi:https://doi.org/10.1007/s00213-018-4860-5 Crossref, Medline, Google Scholar
Kafka, အမ်ပီ (2010). Hypersexual ရောဂါ: DSM-V ကိုများအတွက်တစ်ဦးကအဆိုပြုထားသောရောဂါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, 39 (2) ၏မော်ကွန်း, 377-400။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-009-9574-7 Crossref, Medline, Google Scholar
Karila, L., Wéry, A., Weinstein, A., Cottencin, O., အသနားခံစာ, A., Reynaud, M., & Billieux, J. (2014). လိင်စွဲလမ်းသို့မဟုတ် hypersexual ရောဂါ: တူညီသောပြဿနာများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးအနှုန်းများ? စာပေ၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ လက်ရှိဆေးဝါးဒီဇိုင်း, 20 (25), 4012-4020။ Doi:https://doi.org/10.2174/13816128113199990619 Crossref, Medline, Google Scholar
Khazaal, Y., အာဟပ်, S., Billieux, J., Thorens, G., Zullino, D., Dufour, M., & Rothen, S. (2015). အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ဖဲချပ်ဝေကစားသမားအတွက်အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်ခြင်း၏ factor ဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ JMIR စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး,2(2), e12။ Doi:https://doi.org/10.2196/mental.3805 Crossref, Medline, Google Scholar
Khazaal, Y., ဘရီဗစ်, K., Billieux, J., Zullino, D., Thorens, G., အာဟပ်, S., gmel, G., & Chatton, A. (2018). ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျားတစ်ဦးတစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်နမူနာမှတဆင့်ဂိမ်းစွဲမှုစကေးအကဲဖြတ်: Item တုံ့ပြန်မှုသီအိုရီအဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသော-တုံ့ပြန်မှုမော်ဒယ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအင်တာနက်ကိုသုတေသနဂျာနယ်, 20 (8), e10058။ Doi:https://doi.org/10.2196/10058 Crossref, Medline, Google Scholar
Khazaal, Y., Chatton, A., အာဟပ်, S., မွန် G., Thorens, G., Dufour, M., Zullino, D., & Rothen, S. (2017). အင်တာနက်ကလောင်းကစားသမားတွေလူမှုရေး variable တွေကိုအပေါ်ကွာခြား: တစ်ဦးကငုပ်လျှိုးနေလူတန်းစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ လောင်းကစားလေ့လာရေးဂျာနယ်, 33 (3), 881-897။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10899-016-9664-0 Crossref, Medline, Google Scholar
Khazaal, Y., Chatton, A., Atwi, K., Zullino, D., Khan က, R., & Billieux, J. (2011). အဆိုပါ compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းစကေး၏ Arabic အဘိဓါန် validation ကို (CIUS)။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးမှုကုသမှု, ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်မူဝါဒ,6(1), 32။ Doi:https://doi.org/10.1186/1747-597X-6-32 Crossref, Medline, Google Scholar
Khazaal, Y., Chatton, A., horn, A., အာဟပ်, S., Thorens, G., Zullino, D., & Billieux, J. (2012). အဆိုပါ compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းစကေး၏ပြင်သစ် validation ကို (CIUS)။ စိတ်ရောဂါလပတ်, 83 (4), 397-405။ Doi:https://doi.org/10.1007/s11126-012-9210-x Crossref, Medline, Google Scholar
Khazaal, Y., ဗန်အဆိုတော်, M., Chatton, A., အာဟပ်, S., Zullino, D., Rothen, S., Khan က, R., Billieux, J., & Thorens, G. (2014). Self-ရွေးချယ်ရေးအွန်လိုင်းစစ်တမ်းများအတွက်နမူနာ '' ကိုယ်စားပြုမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်ပါသလား? အွန်လိုင်းဗီဒီယိုဂိမ်းသုတေသနတစ်ခုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအင်တာနက်ကိုသုတေသနဂျာနယ်, 16 (7), e164။ Doi:https://doi.org/10.2196/jmir.2759 Crossref, Medline, Google Scholar
Király, O., မြို့ပြ, R., Griffiths က, အမ် D., အိုဂိုစတန်, C., Nagygyörgy, K., Kökönyei, G., & Demetrovics, Z. (2015). တစ်ခုကအွန်လိုင်းစစ်တမ်းကောက်: စိတ်ရောဂါရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ပြဿနာအွန်လိုင်းဂိမ်းအကြားဂိမ်းလှုံ့ဆျောမှု၏ဖြန်ဖြေအကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအင်တာနက်ကိုသုတေသနဂျာနယ်, 17 (4), e88။ Doi:https://doi.org/10.2196/jmir.3515 Crossref, Medline, Google Scholar
Laier, C., & ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, M. (2014). တစ်သိမြင်မှု-အပြုအမူအမြင်ကနေကျဘာစွဲမှပံ့ပိုးအချက်များပေါ်တွင်ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားများနှင့်သီအိုရီထည့်သွင်းစဉ်းစား။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်မသမာမှု၊ ၂၁ (၄)၊ 305-321။ Doi:https://doi.org/10.1080/10720162.2014.970722 Crossref, Google Scholar
Laier, C., Pawlikowski, M., Pekal, J., Schulte, အက်ဖ်ပီ, & ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, M. (2013). ဘာစွဲ: အတွေ့အကြုံလိင်စိတ်နိုးထညစ်ညမ်းနှင့်မစစ်မှန်သောဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်စောင့်ကြည့်သည့်အခါခြားနားချက်စေသည်။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်,2(2), 100-107။ Doi:https://doi.org/10.1556/JBA.2.2013.002 လင့်ခ်, Google Scholar
Laier, C., Pekal, J., & ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, M. (2014). အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း၏လိင်ကွဲအမျိုးသမီးသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ဘာစွဲဆန္ဒပြည့်အယူအဆအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါတယ်။ Cyberpsychology, အပြုအမူ, နှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့, 17 (8), 505-511။ Doi:https://doi.org/10.1089/cyber.2013.0396 Crossref, Medline, Google Scholar
Laier, C., Pekal, J., & ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, M. (2015). လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အလုပ်မဖြစ်ဖြေရှင်းလိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများအတွက်ဘာစွဲဆုံးဖြတ်ရန်။ Cyberpsychology, အပြုအမူ, နှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့, 18 (10), 575-580။ Doi:https://doi.org/10.1089/cyber.2015.0152 Crossref, Medline, Google Scholar
Laier, C., Wegmann, E., & ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, M. (2018). ဂိမ်းကစားအတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အခြားသောကောင်းကျိုး: ရှောင်ရှားမျှော်လင့်ထားအင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ maladaptive ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များနှင့်ရောဂါလက္ခဏာအကြားဆက်ဆံရေးပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု,9အတွက်နယ်စပ်ဒေသ 304-304။ Doi:https://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00304 Crossref, Medline, Google Scholar
လီဘွမ် အက်စ် R. (1997). လိင်နှင့်ပိုက်ကွန်ကို: လက်တွေ့သက်ရောက်မှု။ လိင်ပညာရေးနှင့်ကုထုံး၏ဂျာနယ်, 22 (1), 21-27။ Doi:https://doi.org/10.1080/01614576.1997.11074167 Crossref, Google Scholar
Levine, အက်စ်ခ (2003). လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏သဘောသဘာဝ: တစ်ဦးကဆရာရဲ့ရှုထောင့်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, 32 (3) ၏မော်ကွန်း, 279-285။ Doi:https://doi.org/10.1023/A:1023421819465 Crossref, Medline, Google Scholar
မာကု, ကေပီ, ဆင်းသက်ရန်, အမ် D., Rosenkrantz, E. အီး, ဘရောင်း, အိပ်ချ်အမ်, & ဟောင်ကောင်, S.-H. (2018). အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire လိင်တူချစ်သူများအတွက် Inventory, လိင်တူချစ်သူ, ရိုးရိုး, trans ဆိုတဲ့နှင့် queer အရွယ်ရောက် validation။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှေ့တိုင်းဆန်နှင့်ကျားမတူကွဲပြားခြင်း၏စိတ်ပညာ,5(1), 122-128။ Doi:https://doi.org/10.1037/sgd0000260 Crossref, Google Scholar
Meerkerk, G. အဂျေ, ဗန် Den Eijnden, R. ဂျေဂျေအမ်, Vermulst, အေအေ, & Garretsen, အိပ်ချ်အက်ဖ်အယ်လ် (2009). အဆိုပါ compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းစကေး (CIUS): တချို့က psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ၊ ၁၂ (၁)၊ 1-6။ Doi:https://doi.org/10.1089/cpb.2008.0181 Crossref, Medline, Google Scholar
မိုင်းလုပ်သား, အမ်အိပ်ချ်, Coleman, E., စင်တာ, ခ။, Ross က M., & Rosser, ခ R. အက်စ် (2007). အဆိုပါ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Inventory: Psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, 36 (4) ၏မော်ကွန်း, 579-587။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-006-9127-2 Crossref, Medline, Google Scholar
Muller, M., ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, M., Mies, J., Lachmann, B., Sariyska, R. Y., & Montage, C. (2017). အဆိုပါ 2D: 4D အမှတ်အသားနှင့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုရောဂါအမျိုးမျိုးပုံစံများ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု, 8, 213 အတွက်နယ်စပ်ဒေသ။ Doi:https://doi.org/10.3389/fpsyt.2017.00213 Google Scholar
ပန်းခြံ, S., ဟောင်ကောင်, K.-E. အမ်, ပန်းခြံ, အီးဂျေ, ဟက်တာ, ကေအက်စ်, & Yoo, အိပ်ချ်ဂျေ (2012). ကိုရီးယားမြီးကောင်ပေါက်အတွက်ပြဿနာကအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါများအကြားအသင်းအဖွဲ့, သတ်သေ ideation နှင့်စိတ်ကြွရောဂါလက္ခဏာတွေ။ သြစတြေးလျနှင့်စိတ်ရောဂါကုသမှု၏နယူးဇီလန်ဂျာနယ်, 47 (2), 153-159။ Doi:https://doi.org/10.1177/0004867412463613 Crossref, Medline, Google Scholar
Pfaus, ဂျေဂျီ (2009). သုံးသပ်ချက်များ: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ Pathways။ အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်,6(6), 1506-1533။ Doi:https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2009.01309.x Crossref, Medline, Google Scholar
Philaretou, အေဂျီ, Mahfouz, အေ Y., & Allen က, ကေ R. (2005). အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ယောက်ျားရဲ့သုခချမ်းသာများအသုံးပြုခြင်း။ အမျိုးသားများအတွက်ရဲ့ကနျြးမာရေး၏အင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်,4(2), 149-169။ Doi:https://doi.org/10.3149/jmh.0402.149 Crossref, Google Scholar
Putnam, E. အီး, & Maheu, အမ်အမ် (2000). အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲနှင့် compulsive: ကုသမှုကို web အရင်းအမြစ်များနှင့်အမူအကျင့် telehealth ပေါင်းစပ်ခြင်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်မသန်စွမ်းခြင်း (၇) (၁-၂)၊ 91-112။ Doi:https://doi.org/10.1080/10720160008400209 Crossref, Google Scholar
ရိဒ်, R. C., လီ, S. အက်စ်, Gilliland, R., Stein, ဂျေအေ, & Fong သည်, T. (2011). ယုံကြည်စိတ်ချရမှု, တရားဝင်မှုနှင့် hypersexual ယောက်ျားတစ်နမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု Inventory ၏ psychometric ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ လိင်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 37 (5), 359-385။ Doi:https://doi.org/10.1080/0092623X.2011.607047 Crossref, Medline, Google Scholar
ရော်ဘင်ဆင်, တီအီး, & Berridge, ကေစီ (2008). စွဲလမ်းမှု၏မက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီ: တချို့ကလက်ရှိပြဿနာများကို။ တော်ဝင် Society က B ကို၏ဒဿနအရောင်းအဝယ်: ဇီဝသိပ္ပံ, 363 (1507), 3137-3146။ Doi:https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0093 Crossref, Medline, Google Scholar
တောင်ပိုင်း, S. (2008). compulsive ကျဘာအပြုအမူများ၏ကုသမှု။ စိတ်ရောဂါဆေးခန်း, 31 (4), 697-712။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.psc.2008.06.003 Google Scholar
Spector, ဗြဲပီ, ကယ်ရီ, အမ်ပီ, & Steinberg, L. (1996). အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire Inventory: ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ, အချက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသည့်အထောက်အထား။ လိင်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 22 (3), 175-190။ Doi:https://doi.org/10.1080/00926239608414655 Crossref, Medline, Google Scholar
Starcevic, V., & Khazaal, Y. (2017). အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်စိတ်ရောဂါမမှန်အကြားဆက်ဆံရေး: အဘယ်အရာကိုလူသိများသည်နှင့်သေးသောအရာကိုလေ့လာသင်ယူရမည်သလဲ? စိတ်ရောဂါကုသမှု, 8 အတွက်နယ်စပ်ဒေသ 53။ Doi:https://doi.org/10.3389/fpsyt.2017.00053 Crossref, Medline, Google Scholar
Sumter, အက်စ် R., Vandenbosch, L., & Ligtenberg, L. (2017). ချိန်းတွေ့လျှောက်လွှာ Tinder အသုံးပြု Untangling ထွန်းသစ်စလူကြီးများ '' တွန်းအား: ငါ့ကို Tinder Love။ Telematics နှင့်သတင်းအချက်အလက်, 34 (1), 67-78။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.tele.2016.04.009 Crossref, Google Scholar
Varfi, N., Rothen, S., Jasiowka, K., နူ, T., Bianchi-Demicheli, F., & Khazaal, Y. (2019). လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, ခံစားချက်, ပူးတွဲမှုစတိုင်, Impulse နှင့် Self-တန်ဖိုးထားစွဲလမ်းကျဘာများအတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အချက်များအဖြစ်။ JMIR စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး,6(1), e9978။ Doi:https://doi.org/10.2196/mental.9978 Crossref, Medline, Google Scholar
Voon, V., မှဲ့, တီခ, BANCA, P., ပေါ်တာ L., မောရစ်, L., မစ်ချယ်, S., Lapa, T. R., Karr, J., Harrison, N. A., Potenza, အမ် N., & Irvine, M. (2014). နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue reactivity ကို၏အာရုံကြောဆက်စပ်။ PLoS တစ်ခုမှာ,9(7), e102419။ Doi:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0102419 Crossref, Medline, Google Scholar
Wartberg, L., Petersen က K.-U., Kammerl, R., Rosenkranz, M., & Thomasius, R. (2014). အဆိုပါ compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းစကေး၏ဂျာမန်ဗားရှင်း Psychometric validation ကို။ Cyberpsychology, အပြုအမူ, နှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့, 17 (2), 99-103။ Doi:https://doi.org/10.1089/cyber.2012.0689 Crossref, Medline, Google Scholar
Weinstein, နံနက်။, Zolek, R., Babkin, A., Cohen ကို, K., & Lejoyeux, M. (2015). ဘာ၏ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအသုံးပြုသူများသည်အကြားရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုဖွဲ့စည်းအတွက်ဘာအသုံးပြုခြင်းနှင့်အခက်အခဲများခန့်မှန်းအချက်များ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု,6အတွက်နယ်စပ်ဒေသ 54။ Doi:https://doi.org/10.3389/fpsyt.2015.00054 Crossref, Medline, Google Scholar
Wéry, A., & Billieux, J. (2017). ပြဿနာဘာ: Conceptual, အကဲဖြတ်နှင့်ကုသရေး။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 64, 238-246။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2015.11.007 Crossref, Medline, Google Scholar
Wéry, A., Deleuze, J., တှငျ Canale, N., & Billieux, J. (2018). စိတ်လှုပ်ရှားမှုဝန်ကိုထမ်းရွက် Impulse ယောက်ျားတွင်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏စွဲလမ်းအသုံးပြုခြင်းကိုခန့်မှန်းအတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်။ ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု, 80, 192-201။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2017.10.004 Crossref, Medline, Google Scholar
Wéry, A., Karila, L., Sutter, P. D., & Billieux, J. (2014). Conceptualisation, အကဲဖြတ် et traitement de la မူတည် cybersexuelle: Une revue de la littérature [Conceptual, အကဲဖြတ်ခြင်း, cybersexual စွဲကုသ: စာပေ၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု]။ ကနေဒါစိတ်ပညာ / စိတ်ပညာ Canadienne, 55 (4), 266-281။ Doi:https://doi.org/10.1037/a0038103 Crossref, Google Scholar
yong, R. K. F., Inoue, A., & Kawakami, N. (2017). အဆိုပါ compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းစကေး၏ဂျပန်ဗားရှင်း (CIUS) ၏တရားဝင်မှုနှင့် psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ။ BMC စိတ်ရောဂါကုသမှု, 17 (1), 201။ Doi:https://doi.org/10.1186/s12888-017-1364-5 Crossref, Medline, Google Scholar
လူငယ်တို့, ကေအက်စ် (2008). အင်တာနက်ကိုလိင်စွဲ: အန္တရာယ်အချက်များ, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်ဆင့်နှင့်ကုသရေး။ အမေရိကန်အပြုအမူသိပ္ပံပညာရှင်, 52 (1), 21-37။ Doi:https://doi.org/10.1177/0002764208321339 Crossref, Google Scholar
လူငယ်တို့, ကေအက်စ်, & ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, M. (2017). တစ်ဦးကပုဂ္ဂိုလ်ရေးရှုထောင့်: အင်တာနက်ကိုဂိမ်းရောဂါများ၏အခြေအနေတွင်သီအိုရီမော်ဒယ်များနှင့်ကုထုံးချဉ်းကပ်မှုပေါင်းခြင်း။ စိတ်ပညာအတွက်နယ်စပ်ဒေသ, 8, 1853။ Doi:https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01853 Crossref, Medline, Google Scholar
Zanetta Dauriat, F., Zermatten, A., Billieux, J., Thorens, G., Bondolfi, G., Zullino, D., & Khazaal, Y. (2011). အွန်လိုင်းမှစစ်တမ်းထံမှအထောက်အထား: ကစားရန်တွန်းအားအထူးလွန်ကဲကဲ multiplayer အွန်လိုင်းအခန်းကဏ္ဍ-ကစားဂိမ်းထဲမှာအလွန်အကျွံပါဝင်ပတ်သက်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ ဥရောပစွဲသုတေသန 17 (4), 185-189။ Doi:https://doi.org/10.1159/000326070 Crossref, Medline, Google Scholar